မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် တမူးမြို့တွင် လူငယ်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး အန္တရာယ် ပြည်သူ့ စကားဝိုင်း ကျင်း? - Yangon Media Group
မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် တမူးမြို့တွင် လူငယ်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး အန္တရာယ် ပြည်သူ့ စကားဝိုင်း ကျင်း?
စစ်ကိုင်း၊ မေ ၆
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ တမူးခရိုင်၊ ပြန်ကြား ရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့် လူငယ်ကွန်ရက်တို့ ပူးပေါင်း ကျင်းပသည့် လူငယ်နှင့်မူးယစ်ဆေး ဝါးအန္တရာယ် ပြည့်သူ့စကားဝိုင်းကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် မေ ၅ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီက တမူးမြို့ ဧပရယ်မွန်ခန်းမ၌ကျင်းပသည်။
အခမ်းအနားတွင် ခရိုင်စီမံ ခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်သင်း အောင်က အမှာစကားပြောကြား ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးနိုင်နိုင်ဝင်း၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင် မောင်လတ်၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြင့်နိုင်ဦးတို့က မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်၍ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများ၊ အနာဂတ်ကာလတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိမ်နင်းရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သင့်သည့်လုပ် ငန်းစဉ်များကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေး ကြသည်။
”တမူးခရိုင်၊ တမူးမြို့နယ်က မိုးရေးမြို့နဲ့ထိစပ်နေပြီး အဓိကမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲ ရောင်းဝယ်သူ တွေက အသက်အရွယ်မရွေးတွေ့ နေရတတ်ပါတယ်။ မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းအသုံးပြုတာတွေ့ရင် သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကို သတင်း ပေးပြီး ပြည်သူတွေက ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်”ဟု တမူး ခရိုင်တမူးမြို့ မူးယစ်တပ်ဖွဲ့စု(၇) မှ ရဲမှူးဇော်မင်းနောင် (မူးယစ် တပ်ဖွဲ့စု)က ပြောကြားသည်။ တက်ရောက်လာကြသည့် ပြည်သူများ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ များမှ မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ် တားဆီးနှိမ်နင်းရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးမေးမြန်းကြရာ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက ပြန်လည်ရှင်း လင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
သြစတြီးယားမှာ လက်ထပ်လိုက်တဲ့ တစ်ဖနီတန်နဲ့ လျူအိုဂျင်